Lahatsoratra momba an'i Afrika
ny fomba hahitana asa any sud sudan
Novambra 19, 2020 Maitri Jha asa, Sodàna Atsimo
South Sudan no firenena farany eto amin'izao tontolo izao izay nahazo ny fahalalahana avy any Sudan tamin'ny taona 2011. South Sudan dia fantatra koa amin'ny hoe Repoblikan'i Sudan atsimo ary ny lehibe indrindra dia misy mponina 37 tapitrisa (tombantomban'ny Firenena Mikambana)
Ny fomba tsotra indrindra fangatahana visa any Oganda !!
Oktobra 31, 2020 Shubham Sharma Oganda, visa ho
Mikasa ny handeha hitsangatsangana any Oganda ve ianao? Raha eny, dia tsy maintsy maniry hahalala momba ny visa Oganda ianao. Saingy, izao ny fizotry ny fangatahana visa dia tsy mila fitsangatsanganana any amin'ny masoivohon'i Ogandey akaiky indrindra. Ity dia
Kenya Visa ho an'ny karana
Oktobra 29, 2020 Shubham Sharma Kenya, visa ho
Zahao ny fepetra takiana Visa ho an'ny Sodana Atsimo
Septambra 28, 2020 Maitri Jha Sodàna Atsimo, visa ho
Sodana atsimo no firenena vaovao indrindra manerantany. Satria nahazo fahaleovan-tena tamin'ny Repoblikan'i Sudan izy tamin'ny 2011 fotsiny. Ary koa, renivohitry ny firenena dia Juba. Na izany aza, mbola tsy firenena malaza be amin'ny fizahan-tany. Angamba noho ny
Ahoana ny fomba fangatahana visa ho an'ny DR-Congo?
Septambra 23, 2020 Antika Kumari DR Kongo, visa ho
Ny Repoblika Demokratikan'i Kongo no firenena lehibe indrindra ao Afrika Afovoany. Ny DR-Kongo dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Kongo-Kinshasa. Io no firenena lehibe indrindra eto Afrika Afovoany. Na izany aza, any Afrika Afovoany izy io, ary tokony hanana entana safari izy io. nefa,
Ahoana ny fomba fangatahana Asylum any Sodana Atsimo
Aogositra 30, 2020 Maitri Jha mpitsoa-ponenana, Sodàna Atsimo
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahazo fampahalalana momba ny fomba fangatahana fialokalofana ao Sodana atsimo ianao. Any avaratra atsinanan'i Afrika no misy azy. Ary koa, Sodana atsimo no firenena faralahy. Nanjary mahaleo tena izy io avy any Sodana tamin'ny 2011. Vitsy ny fitsipika napetraky ny UNHRC hahazoana
Ouganda transport, ahoana no handehanana any Oganda
Jona 6, 2020 Maitri Jha mandehana, Oganda
Ny mandehandeha any Ouganda dia mora, haingana sy malefaka. Ny fitaovam-pitateram-bahoaka any Ogandà sy tsy miankina dia afaka manatona amin'ireo faritra rehetra ao amin'ny firenena. Tanora mafy ilay firenena. Saingy, tsara ny fitaterana. Nifandray tsara teo akaikiny i Oganda